RAMP: Fampiasana votoaty mora eo anelanelan'ny tranokala WordPress | Martech Zone
Talata, Febroary 26, 2013 Alatsinainy 25 Febroary 2013 Douglas Karr
Matetika izahay dia manangana tranokala mijoro ho an'ny mpanjifa ary avy eo mamindra ny tranokala miorina amin'ny famokarana. Miaraka amin'ny WordPress, ny atiny dia mifototra amin'ny rakitra ary hita ao anaty angon-drakitra. Tsotra ny fampifanarahana tahiry, saingy tsy mora toy izany ny mandrindra data. fiakarana dia fitaovana novolavolaina hanampiana ny orinasa hifindra monina ao anaty tranokala ny votoatin'ny WordPress.
fiakarana mamela anao hanao fanovana eo amin'ny tontolon'ny fizotranao, avy eo atsindrio ireo fanovana ireo amin'ny tranokala famokarana anao. Raha vantany vao nodinihina sy nekena ny atiny dia afaka mandeha amin'ny pejy RAMP ianao, misafidy ireo fanovana atiny ireo, ary manosika azy ireo mankany amin'ny tranokala famokarana anao.
fiakarana dia hanao fizahana manokana mialoha ny sidina izay hahazoana antoka fa handeha soa aman-tsara ny zava-drehetra ary hahafahanao manamarina indroa izay kasainao atosika - ao anatin'izany:
Ireo sokajy, tag ary mpampiasa izay voatondron'ny lahatsoratra, pejy sns hafa dia hoforonina ho azy amin'ny famokarana.
Rehefa ampidirina amina andiana iray tsy misy ny pejy ho an'ny ray aman-dreny ny pejy ho an'ny zaza, ary tsy misy ny pejy ho an'ny ray aman-dreny amin'ny famokarana.
Sokajy zaza voafantina izay tsy an-dalam-pamokarana ny sokajy ray aman-dreny ary tsy ao anatin'ny andiany.
Raha misy sary voafantina hiditra ao anaty andiany iray, fa ny sary dia voafafa tao amin'ny rafitry ny rakitra (ivelan'ny WordPress).
Raha misy pejy, sokajy na tag tafiditra ao anaty menio voafantina, saingy tsy misy amin'ny famokarana ary tsy anisan'ny andiany.
Ny atiny izay niova tamin'ny famokarana ary vaovao kokoa noho ny fiovana eo amin'ny sehatry ny fampisehoana.
Ny RAMP dia misy koa ny bokotra miverina ho an'ny andiany farany. Misaotra ireo mpanjifanay ao amin'ny HCCMIS, an mpamatsy fiantohana ho an'ny mpandeha, iza no mampahafantatra anay fa manandrana ny rafitra izy ireo.
Tags: fanaparitahana votoatycrowdfavoritefiakaranafanaparitahana wordpressfamokarana wordpressfampisehoana tsangambato